သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင် COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုများကို လျှော့ချရန် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ကြောင်း တိုကျို ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဖွဲ့ ပြောကြား - Xinhua News Agency
တိုကျို၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန် – ခေါန်ရိန်
ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေး ဆောင်ရွက်ချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် မခြွင်းမချန်အရေးကြီးမှုကိုထောက်ပြပြောကြားရာ၌ သက်ကြီးရွယ်အိုများအကြား ရောဂါကူးစက်မှု အရေအတွက် မြင့်တက်လာခြင်းကို တိုကျိုမြို့တော် အစိုးရ COVID-19 ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဖွဲ့ဆွေးနွေးပွဲက ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်တွင် သတိပေးလိုက်သည်။
ရောဂါကူးစက်မှုဆိုင်ရာ အမြင့်ဆုံးသတိပေးအဆင့်များနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်များကို ထိန်းသိမ်းသွားသင့်ကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်တွင် ပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေး၌ အဆိုပါ အဖွဲ့က ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်တွင်ရရှိသော တစ်ပတ်အတွင်း ရောဂါကူးစက်မှုအသစ် ပျမ်းမျှအရေအတွက်မှာ ၆၈၄ ဦးရှိခဲ့ကြောင်း၊ ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ် သုံးပတ်က ၁,၆၉၉ ဦးရှိခဲ့ရာမှ ကျဆင်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ လွန်ခဲ့သည့် သီတင်းပတ်နှစ်ပတ်က ၁,၄၇၁ ဦးနှင့် သီတင်းပတ် တစ်ပတ်အကြာက ၁,၀၁၅ ဦးဖြင့် အသီးသီး ရှိခဲ့ရာမှ လျော့ကျလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အရေအတွက်အနေဖြင့်မူ မြင့်မားနေဆဲဖြစ်ကြောင်း COVID-19 ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဖွဲ့က ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
အပြင်းအထန် ဖျားနာမှုဖြစ်ပွားနိုင်ခြေမြင့်မားသည့် သက်ကြီးရွယ်အိုများအကြား ရောဂါကူးစက်မှုများကို ထိန်းချုပ်ရေး အာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့် ရောဂါလက္ခဏာပြင်းထန်သည့် လူနာဦးရေ လျှော့ချရန် အားထုတ်မှုက အရေးကြီးကြောင်း ထောက်ပြခဲ့သည်။
မိသားစုဝင်များထံမှ သက်ကြီးရွယ်အိုများအား ရောဂါကူးစက်မှု အရေအတွက် တရှိန်ထိုးမြင့်တက်လာသလို ဆေးရုံများနှင့် စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာများရှိ သက်ကြီးရွယ်အိုများအကြား အစုလိုက်အပြုံလိုက် ရောဂါကူးစက်မှုမြင့်မားလာသဖြင့် ပြည်သူများအနေဖြင့် ဆက်လက်၍ မြင့်မားစွာသတိထားရန်လည်း တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအနေဖြင့်လည်း ဆေးရုံတွင် တက်ရောက်ကုသမှုခံယူနေသည့် အတွင်းလူနာအရေအတွက်မှာ ကျဆင်းမည့် လက္ခဏာမရှိသေးဘဲ စိုးရိမ်ဖွယ်အခြေအနေ ကျန်ရှိနေသေးကြောင်း အဆိုပါ အဖွဲ့က ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Curbing elderly COVID-19 infections is important: Tokyo expert panel
TOKYO, Feb.4(Xinhua) — A Tokyo Metropolitan Government panel of COVID-19 experts Thursday warned of the increasing number of infections among the elderly while pointing out the importance of thorough implementation of anti-virus measures.
The panel concluded that the highest alert levels for infections and medical care systems should be maintained atameeting on Thursday.
Although the average seven-day number of new infections reported on Wednesday, which stood at 684, declined from 1,699 three weeks earlier, and also showed signs of declining compared to 1,471 two weeks earlier and 1,015 one week earlier, the number still remains high, the panel said.
It pointed out the importance of making an effort to reduce the number of patients with severe symptoms by focusing on curbing infections among the elderly who are at high risk of developing into serious illness.
It also called on people to remain on high alert as cluster infections among elderly people increased in hospitals and nursing care facilities, while the number of elderly infections from their family members also surged.
As to the medical care system, the panel said that the situation remains critical with no signs of decline in the number of inpatients. Enditem
People wearing face masks crossastreet in Tokyo, Japan, Dec. 12, 2020. Japan loggedarecord of 3,037 daily COVID-19 cases on Saturday, surpassing 3,000 for the first time as Tokyo and several other prefectures marked records inasingle day amidaresurgence of infections. (Photo by Lyu Tianze/Xinhua)